wararka maanta-arlaadii.net » Madaxweynaha Galmudug ee Xaaf oo Safar Qarsoodi ah ku tagay magalada Garoowe Ee Puntland
Madaxweynaha Galmudug ee Xaaf oo Safar Qarsoodi ah ku tagay magalada Garoowe Ee Puntland
Madaxweynaha Maamulka Galmudug Axmed Ducaalle Geelle (Xaaf) ayaa safar qarsoodi ah ku tagay Magaalada Garowe ee xarunta Puntland, maalintii Jimcaha ee shalay.
Warbaahinta ayaa ogaatay in Madaxweyne Xaaf uu xalay ku hoyday Magaalada Garowe, halkaasina uu kulamo kula qaatay Madaxweynaha Puntland C/wali Gaas, sidoo kalena ah Gudoomiyaha Golaha Iskaashiga ee dowlad Goboledyada dalka ka jira.
Xaaf ayaa lagu soo waramayaa in diyaarad gaar ah uu ka raacay Magaalada Dhuusamareeb, waxaana la socday ciidamo isaga ilaalo u ah iyo qaar ka mid ah Xoghayntiisa, Safarkiisa kuma aysan wehlinayn Siyaasiyiin ama Xildhibaano.
Xaaf ayaa safarkiisa loo badinayaa inuu la xariiro labadaas arrimood iyo sidii Puntland fara galin ugu samayn lahayd maadama Madaxweyne Gaas Guddoomiye u yahay madasha maamul goboleedyada.
Safarka Madaxweynaha Galmudug ee Magaalada Garowe uu ku tagay, sidoo kale waxa ay ku soo aadeysaa iyadoo maalmaha soo socda la qaban qaabinaayo qabsoomida Shirka amniga Qaranka oo ka dhici doono Magaalada Baydhabo ee xarunta KMG ee Maamulka Koonfur Galbeed.
Amanka Magaalada Muqdisho Oo si weyn Loo Adkeeyaya Iyo Wadooyinka Qaar Oo la Xirxiray